Santiago Posteguillo, "mambo" wenhoroondo yenhoroondo | Zvazvino Zvinyorwa
alex martinez | | Vanyori, Novela
Mufananidzo naSantiago Posteguillo.
Iyo nhoroondo yenhoroondo inopfuura iripo mune yazvino zvinyorwa zvechiitiko. Iwe haugone kuramba izvo iyi genre ndeimwe yeinonyanya kuverengerwa munyika medu. Nenzira iyi, pakati ari bestsellers zvinonyanya kuzivikanwa tinogona kuwana mabasa asingaperi anotibvumidza kufamba kune zvakapfuura, sekunge kuti yaive nguva yengarava, uye kunakirwa nekuvandudzwa kweruzivo rwedu rwechiitiko nenzira inonakidza uye inonakidza.
Munyika medu tine vanyori vakakurumbira vakazvimisikidza mumhando iyi uye nenzira isingafungidzike vakava zvakafanana kwavari. Zvisinei, pane zvese, Ndinoda kuratidza wandinofunga kuti "kumisa" kwevanyori vedu, "mambo" wechokwadi wechiitiko chenyika sekureva kwenhoroondo yenhoroondo.
Ndiri kutaura, hongu, nezve Santiago Posteguillo uye ake matatu matatu matatu akakumikidzwa kuna Publio Cornelio Escipión naTrajano. Aya mavara, eakakosha kwazvo mukati meyakasarudzika nhoroondo uye pamusoro pezvose, mukati meiyo nhoroondo yeRoma.
Avo vedu vanofarira nhoroondo nezvose zvinechekuita neyekare yeRoma tinazvo chinenge chisingaperi huwandu hwemabasa akanyorwa ane chekuita neichi chiitiko chenhoroondo. Ben Kane, Massimiliano Colombo, Steven Saylor kana Simon Scarrow ndivo, semuenzaniso, muenzaniso wevanyori vakuru vakanyora zvinyorwa zvakagadziriswa mune ino nhoroondo nguva uye avo, semunyori watiri kutaura nezvake, Ndinodawo kuvakurudzira uye ndovakoshesa zvakanyanya.
Kunyangwe zvakadaro, wandinoda achiri Santiago Posteguillo nekuti trilogies dzake mbiri dzinoita senge remhando yepamusoro basa rehunyanzvi pane nhoroondo uye nhoroondo. Chimwe chinhu icho, kana zvasvika kune nyaya yeRoma pachayo, hazvisi nyore kuwana pakati pevanyori venyika. Zvichida zvakare, zvisingaite, Ichi chaicho chokwadi chekuti iye munyori wechiSpanish chinobatsirawo, mune yangu nyaya, kumuona semumwe wevanyori vepamusoro vese kuna avo ini ndakave nehunyanzvi hwekuverenga uye avo vakapa basa ravo kunoverengera yakagadziriswa munyika yeRoma.
Iwo mabhuku matatu eiyo trilogy yakapihwa kunaPablio Cornelio Escipión.
Uchapupu hweiyi huwandu hwezvikwereti uye kucherechedzwa kwakaunganidzwa nemunyori mumakore achangopfuura. Pamubairo uyu nekucherechedzwa zvinomira, semuenzaniso, kuve fainari ye2008 Guta reZaragoza Mubairo Wepasi Pose weNhoroondo yeNhoroondo na Mauto akatukwa. Iva akanakisa Wenhoroondo Novelist Hislibris 2009 we Kutengeswa kweRoma, Cartagena Historical Novel Vhiki Mubairo 2010 kana Historical Literature Mubairo 2013, pakati pevamwe.
Kwese kuzivikanwa uku kwakavakirwa, muchidimbu, pachokwadi chekuti iye muValencian munyori nemabhuku ake yakwanisa kupa muverengi mukana wekuziva wekutanga-ruoko hunhu uye nhoroondo yezvikamu zvakateedzana zvezvakaitika nekutenda kune yakanakisa zvinyorwa kutenderedza ezuva nezuva, ezvematongerwo enyika kana ehondo nzira yehupenyu yeese republican neumambo Roma.
Panguva imwecheteyo, rake rekunyora maitiro anotendera vaverengi vasina kukwezva kune nhoroondo yekudzidza zvinonzwisisika zvinosanganisira pakurangana kwevatambi kusiya parutivi mamiriro azvinoitika, pakupedzisira uye nenzira isingachinjiki, kupedzisira wapindwa muropa nenhoroondo yeRoma uye kudzidza kwake asingatombozviziva.
Mabhuku ari e trilogy yakapihwa Trajan.
Kune rimwe divi, zveshuwa, vese avo vaverengi vanonzwa kukwezva nenhoroondo uye kudzidza kwayo, vachaona mune basa raSantiago Posteguillo kusagadzikana kwakaoma kuenzanisa uye mukana wakakwana wekuenderera mberi uchishamisika munhoroondo yeRoma, simbisa uye wedzera ruzivo rwavo uye vanakidzwe nenjodzi dzezvematongerwo enyika nevehukama dzakaratidza nguva dzakatsanangurwa nemunyori.
Nechikonzero ichi, ini ndinotsunga kufunga matirogiki maviri eSantiago Posteguillo semabhuku maviri enhoroondo akanakisa ane hukama neRoma yekare uye munyori wayo semunyori akanakisa werudzi urwu. Kunyangwe izvi, uye senguva dzose, achiri maonero angu ekuzvininipisa uye Ini ndinokurudzira vateveri vedu veActualidad Literatura kuti vataure, muchimiro chekomendi, kwavo kwavo kwakatenderedza mamanoveli akakumikidzwa kuRoma yekare nenyika yake yose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Santiago Posteguillo, iye «mambo» wenhoroondo yenhoroondo
Ndatenda zvikuru nekuda kwemashoko ako uye ndinofara kuti isu tinogovana zvakafanana zvido uye zvinongedzo zvine hukama naSantiago Posteguillo. Ichokwadi ndechekuti iwo mamwe emabhuku iwayo aunochengeta sepfuma. Zvakare chakanakisa chinyorwa chako pane aya trilogies. Tichave tichitaura nezvenyaya iyi nekumbundira kwakasimba.
Kunge pfuma huru kwazvo, zvirokwazvo. Ini ndakaburitsa iyo Scipio trilogy zvese panguva imwe chete, kunyange ndaive ndamboverenga iyo Trajan trilogy kare, iyo yandinofarira zvakanyanya. Uye ndinavo segoridhe riri pamucheka.
Ticharamba tichitaura. Ah, ini zvakare ndinoona kuti wako mukuru munyori ndiPérez-Reverte. Zvakanaka, tichava nezvakawanda kuti titaure nezvazvo. Ini ndichangotanga Falcó. Ini ndichataura. Imwe hug.
Zviitiko kuNobel Prize yeMabhuku, Bob Dylan
Ngarava dzinozivikanwa II. Neye rum bhodhi vapambi